नैतिकता हरण भएको यस्तो वकिल: रोएर प्रेम र दोस्रो बिहे, स्वार्थ पूरा भएपछि गर्नुसम्म गरे | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
नैतिकता हरण भएको यस्तो वकिल: रोएर प्रेम र दोस्रो बिहे, स्वार्थ पूरा भएपछि गर्नुसम्म गरे
प्रकाशित मिति २९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । नैतिकता हरण भएपछि कसको के लाग्छ ? किन रोइस मंगले आफ्नै ढंगले भनेजस्तै भएको छ, अस्ट्रेलिया बस्ने एक वकिललाई अहिले । पहिला अरुलाई रुवाए अहिले आफू रुने दिन सुरु भएका छन् ।
केटी भनेपछि मरिहत्ते गर्ने सिड्नी निवासी वकिल खिलेन्द्र तिमल्सिनाले आफ्नै पत्नीको नाङ्गो फोटो मात्र खिचेनन् त्यसको ब्यालकमेलिङ पनि गर्न थाले । अनर्गल प्रचारको त कुरै छाडौं । एक युवतीलाई ६ महिनासम्म रोईकराई गरेर मोहजालमा पारे, बिहे गरे । हनिमुनका लागि पोखरादेखि अनेक सहर पनि गए । त्यहि क्रममा उनको नग्न तस्बिर खिचे, अहिले चरित्रको बाहनामा घरपरिवारदेखि अन्य सदस्यलाई सोही तस्बिर देखाएर ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको पीडितले बताएकी छन् ।
यतिमात्र होइन, उनले प्रहरीमा उजुरी हालेर कारबाहीको माग समेत गर्दैछिन् । ‘पति भएर मेरो चरित्रको धज्जी उडाउनेलाई म छाड्नेवाला छैन, उसले मलाई दिनु सम्मको मानसिक यातना दिएको छ’, पीडितले जनप्रहारसँग भनिन् ।
बिहे गरेका केही महिनादेखि नै तिमल्सिनाले आफूलाई त्यसप्रकारको व्यवाहार मात्र नगरी आफ्ना आपत्तिजनक तस्बिरहरू आफन्तलाई पठाउँदै परिवारलाई पनि दबाब राखेको उनको गुनासो छ ।
पत्नीका रूपमा भिसा पठाएर अस्ट्रेलिया समेत घुमाइसकेका तिमल्सिनाले नेपाल आएका बेला ‘भावनात्मक दबाबमा पारी ढाँटेर आफूसँग बिहे गरेको’ ति युवतीको आरोप छ । अहिले उनी डिभोर्स पनि मागिरहेकी छन् । बिहे गरुन्जेलसम्म तिमल्सिनाले आफू एक्लो भएको बताएका थिए । पीडित त्यसबेला छाँगाबाट खसिन् जब उनकी जेठी पत्नी र सन्तानसमेत रहेको चाल पाइन् ।
‘तैपनि मैले बिहेलाई स्वीकार गर्छु, यस्तो परियो भन्ने ठानें । तर, उनी मसँग पर बस्ने, पत्नीको व्यवाहार नगर्ने, मेरा आपत्तिजनक तस्बिर आफ्ना सर्कलमा पठाउने र अनेकथरी भन्ने गरे । आजित भएर म मिडियामा आउनुप¥यो’, उनले भनिन् ।
तिमल्सिना र उनको बिहे भएको र सो समयमा ति युवतीसँग गरेका अन्तरंगका तस्बिरहरू र युवतीलाई मानसिक यातना दिँदै गरेका संवादका कतिपय अडियोहरू पनि जनप्रहारसँग सुरक्षित छ । ‘पति पत्नी भएपछि हुने अन्तरंगसहित आपत्तिजनक तस्बिर उनले झुक्याएर लिएका रहेछन्, अहिले अपशव्द प्रयोग गर्दै गाली गर्छन् । उल्टै केही गर्न नसक्ने भन्दै धम्की पनि दिन्छन्’, पीडितले भनिन् ।
विर्तामोड नगरपालिकामा १२ चैत, २०७४ मा दुवै जनाको सामाजिक परम्पराअनुसार बिहे गरेको प्रमाणित गर्दै ‘बिबाह दर्ताको प्रमाणपत्र’ पनि दिएको छ । जसको ‘नोटरी प्रमाणित गरी’ पत्नीका रूपमा पीडितलाई एक पटक अस्ट्रेलिया घुमाएका थिए, तिमल्सिनाले ।
‘मैले उसको घरमा गएर बस्छु पनि भनेकी छु । तर, उसले उल्टै धम्की दिएपछि माइतीमा नै सहारा लिएर बस्नुपरेको छ’, पीडितले सुनाइन्,‘यहाँ बस्दा पनि मानसिक दबाब दिन बाबुदेखि दाजुसम्मलाई आपत्तिजनक तस्बिर पठाउने गरेका छन् ।’
तिमल्सिनाले फेक फेसबुक आइडी ‘सिरा राजा’को नामबाट पनि पत्नीलाई बारम्बार मानसिक यातना दिएका छन् । उनले पत्नीसँग गरेका भाइबरलगायतका अन्य संवादमा पनि अश्लील शव्दको प्रयोग ज्यादा गरेका छन् । पीडितका दाजुका अनुसार घरपरिवारलाई दबाबमा राख्नका लागि तिमल्सिनाले अनेक प्रकारका हत्कण्डा गर्दै आएका छन् । अहिलेचाहिँ सम्पर्कबाहिर भएका छन् ।
पीडितसँग काठमाडौंमा देखादेख भएपछि उनले बारम्बार सम्पर्क गर्न थाले । ‘प्रेम गर्ने, बिहे नगरी बस्नै नसक्ने भनेर ६ महिनासम्म मेरो पछि लागेका थिए’, पीडितले भनिन्,‘बिहे भएको छैन, लिभिङ रिलेशनसीप थियो टुट्यो भनेर रोईकराई गरेपछि म बिहेका लागि पनि तयार भएँ ।’ पीडित परिवारबाट तिमल्सिनाले ३४ लाख रूपैंया कारोबार गर्ने नाममा लगेको आरोप लागेको छ । यता, तिमल्सिनाले उक्त प्रकरणबारे खुलेर बोलेनन् । उनले कतिपय कानुनी कुरा रहेकाले भन्न नमिल्ने बताए ।
पोखरा । बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कार्यक्र कतै अलपत्र छ भने…
सप्तरीमा प्रहरी हवल्दारमाथि गोली प्रहार : अवस्था गम्भीर
सप्तरी । सप्तरीमा बुधबार राति मोटरसाइकलमा आएका अज्ञात समूहको गोली प्रहार गर्दा प्रहरी हवल्दार महेन्द्र चतरी यादव गम्भीर घाइते…
अदीति र रुविष्काले देखाए कोरियामा जादु
काठमाडौं । उदयीमान मोडलहरु विक्रम आदित्य महासेठ, अदिति अधिकारी, रुविष्का श्रेष्ठ र आदर्श ज्ञवालीले बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय अवार्ड नेपाल भित्र्याउन…
शास्त्रले भन्छ यस्ता कर्म गर्ने मान्छेहरु कहिल्लै धनी हुँदैनन्
एजेन्सी । भगवान रामको कथा रामचरित मानसमा अलग–अलग प्रसंग मार्फत धेरै सन्देश दिइएको छ । रामचरित मानसको आरण्य एउटा…
गुल्मी कारागारका कैदीबन्दीले कमाउँछन् मासिक १० हजार
गुल्मी । कारगारभित्रै कसरी कमाउन सकिन्छ ? धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, सीपको सदुपयोग भयो भने कारागारभित्र पनि…